Izeluleko ezi-5 Zokuhlala Usebenza Njengoba Usebenza Ekhaya - LucidPix
Izeluleko ezi-5 Zokuhlala Usebenza Njengoba Usebenza Ekhaya
Izeluleko Ezisihlanu Zokuhlala Usebenza Njengoba Usebenza Ekhaya
Njengoba eminye imikhawulo yokuhlala ekhaya isetwa emhlabeni wonke, izinkampani eziningi zisebenzise izinqubomgomo zomsebenzi ezikude. Lokhu kushiya abaningi bethu bebhekene nesimo esingajwayelekile: ukusebenza ekhaya. Lezi zeluleko ezinhlanu zizokusiza uqiniseke ukuthi uhlala ukhiqiza ekhaya futhi ugcina impilo yakho engqondo.
Icebiso # 1: Lungela Umsebenzi
Ukuze uhlale ukhiqiza ekhaya, ufuna ukulingisa usuku lwakho lomsebenzi ojwayelekile ngangokunokwenzeka. Qala usuku lwakho ngenqubo efanayo obuzoyilandela uma empeleni uya emsebenzini. Lokhu kubaluleke kakhulu ngalesi sikhathi sokubhubhisa, njengoba ukuntuleka kwenqubo ejwayelekile yansuku zonke kwenza abaningi bazizwe behlukaniswe nempilo yabo ejwayelekile.
Yenza izinto obungazenza ngaphambi kokusebenza, njengokupheka ikhofi, ukugqoka ngokwasemzimbeni, noma ukuhamba nenja yakho lapho uhamba. Ngokulandela okwakho "Ukulungela" inqubo, uzivumela ukuba ulungele ngokwengqondo nangokomzimba usuku lwakho lomsebenzi esizayo, noma ngabe luzokwenzeka ekhaya.
Ithiphu # 2: Qamba Indawo Yokusebenzela Ekhaya
Abantu abaningi abakwazi ukuhlala bagxile ekhaya ngoba bahlala befiphaza imigqa phakathi kwekhaya nomsebenzi. Njengoba kushiwo ngaphambili, kubalulekile ukuzama ukuphinda usuku lwakho lomsebenzi ngangokunokwenzeka. Ngakho-ke, uma ujwayela ihhovisi elibonakalayo, setha indawo yokubeka umzimba ekhaya kanjalo.
Guqula yakho igumbi lokuphumula lingene ehhovisi lasekhaya ngokungeza ideski nezinto, noma umsebenzi ovela ku ekhoneni ethule lendlu yakho yokuphumula. Noma kunjalo uhlela indawo yakho yokusebenza, qiniseka ukuthi uguquguquka ekusebenziseni lesi sikhala nsuku zonke. Ngale ndlela, lapho ufaka indawo yakho yokusebenza, ingqondo yakho izobona ukuthi sekuyisikhathi sokugxila futhi wehle usebenze.
Ithiphu # 3: Hlala Uhlelekile Ngomsebenzi Wansuku Zonke Kusukela Kuhlelo Lwasekhaya
Ngenkathi usekhaya, kungaba yinselele ukulandela umkhondo wokuthi yimuphi umsebenzi okufanele uwenze usuku lwakho lonke. Qaphela izinto eziza kuqala kuwe nesikhathi esibekiwe ngokwakha uhlelo lwakho umhleli wezinsuku zonke, lokho kuchaza ukuthi yimuphi umsebenzi owenzayo nokuthi uzowenza nini. Zizwe ukhululekile ukufaka izinto ezihlobene nomsebenzi ezingekho emsebenzini ohlelweni lwakho, njenganoma imiphi imisebenzi yasendlini. Ungasithatha isinyathelo esisodwa ngokuya ngokubeka umgomo noma umkhawulo wesikhathi somsebenzi ngamunye. Gxila kokuqeda umsebenzi ngamunye ngasikhathi bese unqamula ohlelweni lwakho uma usuwuqedile.
Icebiso # 4: Ungavumeli Ukusebenza Kukuchithe
Kwabanye abantu, ukusebenza ekhaya kungaletha iziphazamiso eziningi. Kodwa-ke, okuphambene nalokho kuyenzeka nakubantu abaningi. Uma uthola ukusebenza ekhaya kungakuthinti kancane, ungazikhandla ngokweqile, okungaphazamisa nokukhiqiza kwakho.
Sincoma ukulinganisa usuku lwakho lomsebenzi ngokwenza izinto ezihlobene nomsebenzi ezingekho emisebenzini ukuze wephule ukonga kosuku lwakho lomsebenzi. Lokhu kungabonakala kungahambisani, kepha ukubamba iqhaza emisebenzini ehlobene nomsebenzi kungakhuphula amazinga akho wokuqina kanye nokukhiqiza. Thatha umdlalo omusha, kungaba ukupheka, ubuciko, noma ukuthuthukisa amakhono akho wezithombe nge I-LucidPix.
Ithiphu # 5: Hlala uxhumekile ngenkathi usebenza ekhaya
Manje njengoba ihhovisi lakho lonke selisebenza ekhaya, ukuntuleka kokuxhumana nabantu osebenza nabo kungakwenza uzizwe unesizungu. Ukuze unqande lo muzwa, xoxa nabo osebenza nabo, abangane nomndeni umbhalo futhi izinsizakalo zemiyalezo yevidiyo. Uma ungahleleli ukushiya ikhaya lakho nganoma isiphi isikhathi, lokhu kuhlangana kwezenhlalo okubonakalayo kungahamba ibanga elide.
Kubalulekile futhi ukuxhumana nabangane bakho nomndeni wakho okungenzeka ukuthi uzizwa ekhathazekile ngalesi sikhathi, ikakhulukazi ngoba ukuhlala yedwa kungakhulisa le mizwa. Manje, kunanini ngaphambili, kubalulekile ukuthi sifinyelele, singene, futhi sinakekelane.
Landa i-LucidPix ye-Android or Landa i-iPhone! Qiniseka ukuthi wabelana ngezithombe zakho kumakhasi we-Facebook weLucidPix ukuthola ithuba lokufakwa eqenjini! Ungaba nabo Izithombe ezinhle kakhulu ze-LucidPix 3D, Izithombe zeLucidPix ze-3D ku-Facebook, noma elinye ikhasi leqembu le-3D Facebook!
Ungazithatha Kanjani Izithombe ze-3D
← Amathiphu Wezithombe Zokuqina